Mamalan-kira indray VANF - Vava soa sakafo
Mamalan-kira indray VANF – Vava soa sakafo
Taom-baovao. Vanim-potoanan’ny Firariantsoa. Vanim-potoanan’ny hafatra.
Enimpolo taona amin’ity taona 2020 ity no niverenan’ny Fiandrianam-pirenena. Araka ireo fifanarahana teo amin’ny Frantsay sy Malagasy vita sonia ny 2 aprily 1960, nanafoana ny Lalàna tamin’ny 6 aogositra 1896, izay nanambara an’i Madagasikara ho zanatany frantsay.
Isan’ny kitro amaharana, fototra iorenana, andry mitondra, izany fiandrianam-pirenena izany ny tenin-drazana izay tsy nindramintsika na tamin’iza na tamin’iza fa lova nentin’ireo Razambe niampita ny Ranomasimbe Indiana.
Na dia isan’ny teny ofisialy voalaza hatrany hatrany tao anatin’ireo Lalam-panorenena nifandimby aza anefa ny «Teny malagasy», dia lefilefy ary mandefindefitra manoloana ny teny frantsay mbola manankery amin’ny zavatra maro andavanandro : raha hameno ravin-tseky any amin’ny banky, mbola amin’ny teny frantsay manontolo ; raha maharay faktiora avy amin’ny JIRAMA, mbola amin’ny teny frantsay hatramin’ny faingo ; raha hizaha Didy aman-Dalàna, ny volavola amin’ny teny frantsay aloha no ho hita izay vao manaraka ny dikany amin’ny teny gasy.
«Andrianiko ny Teniko, ny an’ny hafa feheziko» : ilay Fanagasiana nokasaina, ny taona 1972-1978, dia mainka nanafintohina noho ny kitoatoa anefa bontolo nitondrana azy. Tsy ratsy velively ny hevitra fonosin’ny Fanagasiana, saingy ilay fomba nanatanterahana azy dia nampanahy satria sanatria ka toa rorona no fahatsapana azy : ilay an’ny hafa efa voafehy, nasaina nariana ; ny an’ny tena natao ho andrianina, tsy ampy fitaovana. Dia teo, sadasada teo. Feno tapany avy andaniny, banga antsasany avy ankilany. Raha ohatra aloha ka fampitovian-tsaranga no tanjona tamin’ireny, dia tafita ihany satria tafaray tsy nahay na inona na inona ny zaza Malagasy.
Ho fandraisana anjara ary, amin’ny ezaka mbola miandry antsika amin’izany fiandrianan’ny tenim-pirenena izany, indreto ohabolana vitsivitsy notsongaina noho ny hafatra manokana fonosiny, na noho ny endriny miavaka.
Ny mandainga tsy misy, fa ny mivadi-bolana be ihany ;
Lala-masaka omaly, manjary tevan-kamono
Natao sanga ka nanakona, natao tandroka ka nanoto ;
Na misodika ho herotra aza, tsy avelan’ny ronono tsy ho iray razana
Raha hena tsara no handrahoina, aza kitay fakoina no tadiavina ;
Aza mba boboka asian-tsoa, faly asian-dratsy, malailay fonosina, mandady hajaina, mitsindroka andrianina…
Tanety lava ny 2020, misy hisainana.
Gouvernance des ressources naturelles – Une synergie multisectorielle est nécessaire